Otu Computer Akọrọ Music n'etiti Multiple iPhone, iPad, iPod Devices
Olee otú Jiri Otu Computer Akọrọ Music multiple iPhones, iPads, na iPods
> Resource> iPhone> Olee otú Jiri Otu Computer Akọrọ Music multiple iPhones, iPads, na iPods
"Lee bụ ihe. Ugbu a, na ezinụlọ m anyị nwere abụọ iPhones na a ọhụrụ zụtara iPod maka nwa m. Achọrọ m itinye ụfọdụ ụmụaka akụkọ na music na iPod. Ọ bụ n'ebe ahụ ihe n'ụzọ dị mfe ime nke a na nanị kọmputa? Ndi m nwere melite ọzọ iTunes akaụntụ? "
-Eme ihe n'eziokwu, mwube iche iche iTunes akaụntụ bụ ụzọ ịkọrọ music site na otu kọmputa na-multiple iPhone, iPad, na iPod ngwaọrụ. Otú ọ dị, ọ bụghị ihe a ezi ụzọ. Ịmepụta multiple iTunes akaụntụ pụtara ihe Ama dejupụta na okwuntughe na-echeta. N'ezie, e nwere mma na mfe ụzọ ịkọrọ music site na otu kọmputa na otutu iPhone, iPad, na iPod ngwaọrụ - agbalị Wondershare TunesGo. Ọ na-ahapụ ị nyefee music site na otu kọmputa na-dị iche iche iPhones, iPads, na iPods ozugbo. Na oge ọ bụla na na 3 nzọụkwụ, ị ga-nweta ihe mgbaru ọsọ gị.
Nzọụkwụ 1. Wụnye TunesGo
Download na wụnye nri TunesGo na kọmputa gị. Ma TunesGo (Windows) na TunesGo (Mac) dị. Na-esonụ, anyị na-TunesGo Windows version dị ka ihe atụ na-ekwu okwu banyere otú iji otu kọmputa ịkọrọ music ka otutu iphones, iPads, na iPods.
Rịba ama: Ma TunesGo Windows na Mac nsụgharị akwado iPhone, iPad, na iPod emetụ na-agba ọsọ iOS 5 ma ọ bụ mgbe e mesịrị (ọhụrụ iOS 9 gụnyere). E wezụga na, TunesGo (Windows) na-akwado iPod nano, iPod kpochapụwo, na iPod ịkpọgharịa dị ka mma.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ iPhone / iPad / iPod na PC
Jikọọ iPhone / iPad / iPod gị na kọmputa na ẹkedori TunesGo. TunesGo ga chọpụta ngwaọrụ gị na-egosipụta ya Ama na isi window. Wee pịa Media na ekpe window ebi ndụ. Site ndabara, ọhụrụ popped elu window bụ Music window. Si ebe a, ihe niile songs na ngwaọrụ gị nke na ị na ejikọrọ na PC na-egosipụta.
Nzọụkwụ 3. Nyefee music site na kọmputa / iTunes ka iPhone / iPad / iPod
Na Music window, ị nwere ike pịa Tinye nyefee chọrọ songs kọmputa ma ọ bụ iTunes ka ngwaọrụ. Ọ bụ ezigbo mfe na mfe. Tinye bụrụ na ị na ejikọrọ ngwaọrụ abụọ oge ọ bụla, i nwere ike ịkọrọ music n'etiti ha. Họrọ songs ị chọrọ nyefee na otu ngwaọrụ na pịa triangle n'okpuru "Export ka" nyefee music site na otu ngwaọrụ ọzọ.
Na TunesGo, ị ga-mgbe nchegbu banyere otú iji kọmputa nyefee music ka otutu iPhones, iPads, na iPods. I nwere ike ime ya na-enweghị a ikedo.
Gbalịa TunesGo iji otu kọmputa ịkọrọ music ka otutu ngwaọrụ.
Best Desktọpụ iOS File Manager jikwaa iOS Files
Olee otú iji hazie Photos on iPhone (iPhone 6s gụnyere)
Atụmatụ maka Ịmafe si gam akporo ka iPhone
Edebere n'etiti Galaxy S6 Edge na iPhone 6
Olee otú Wepụ Videos si iPhone / iTunes ndabere
2 Ụzọ Nyefee Ndi ana-akpo si Sony Xperia ka iPhone
Olee otú mmekọrịta iPhone na 2 Computers-enweghị adịkwa Data